Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Setroka misy poizina manenika an'i Delhi taorian'ny fetiben'ny Hindu
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Setroka misy poizina mandrakotra an'i Delhi taorian'ny fetiben'ny Hindu.
I Delhi no manana ny kalitaon'ny rivotra ratsy indrindra amin'ireo renivohitra rehetra eran-tany, saingy ratsy indrindra ny famakiana ny zoma satria nankalaza ny Diwali, fetin'ny jiro Hindu, ny Alakamisy alina ny mponina tao an-tanàna.
Ny zoma maraina, nisondrotra ny mari-pamantarana kalitaon'ny rivotra ao India, nahatratra 459 tamin'ny maridrefy 500.
Ny fandotoana tany Delhi tamin'ny zoma dia avo in-10 farafahakeliny noho ny fandotoana tany Londres.
Ny fatran'ny poizina poizina PM2.5, izay mety hiteraka aretim-po sy taovam-pisefoana, dia mihatra amin'ny ambaratonga mampidi-doza.
Nitombo ny fanondroana ny kalitaon'ny rivotra ao India, mahatratra 459 amin'ny maridrefy 500 ankehitriny, izay manondro ny fahalotoan'ny rivotra 'mafy' – ny isa ambony indrindra voarakitra tamin'ity taona ity.
Araka ny loharanom-baovao an-tserasera, ny loto ao Delhi avo 10 heny fara fahakeliny noho ny tany Londres ankehitriny.
Nifoha tamin'ny zoma maraina ny mponina ao an-drenivohitr'i India nahita ny tanànany tao ambanin'ny setroka misy poizina, taorian'ny nandàvan'ny mpiravoravo ny fandrarana ny fampiasana afomanga raha olona an-tapitrisany no nankalaza ny fetin'ny jiro hindoa omaly alina.
Ny fatran'ny poizina poizina PM2.5, izay mety hiteraka aretim-po sy taovam-pisefoana, dia mihatra amin'ny ambaratonga mampidi-doza. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia mihevitra fa tsy azo antoka ny haavon'ny PM2.5 isan-taona mihoatra ny dimy mikrograma, saingy tamin'ny zoma, ny tanàn-dehibe 20 tapitrisa mahery dia nahita ny salan'isa 706 micrograms manerana ny tanàna. Ny Indian Express dia nitatitra fa ny haavon'ny PM2.5 dia nandrefy 1,553 micrograms tamin'ny 1 ora maraina tamin'ny zoma.
Sarin'i Delhi nozaraina an-tserasera dia mampiseho zavona fotsy mikitroka eo ambonin'ny renivohitra, ary mihena be ny fahitana.
Delhi manana ny kalitaon'ny rivotra ratsy indrindra amin'ireo renivohitra rehetra eran-tany, saingy ratsy indrindra ny famakiana ny zoma satria nankalaza ny Diwali, fetin'ny jiro hindoa, ny Alakamisy alina ny mponina tao an-tanàna. Maro no nandà ny fandrarana ny afomanga, nanampy setroka misy poizina kokoa amin'ny rivotra efa voapoizina avy amin'ny loharano maharitra.
Na dia voarara mafy aza ny fomba fanao, ny fandoroana vodivary – ny fizotry ny fandoroana ireo sisa tavela mba hiomanana amin'ny tsingerina manaraka – dia manampy amin'ny fandotoana rivotra mahafaty amin'izao vanim-potoana izao. Ny fotoanan'ny Diwali dia mifanandrify amin'ny an'ny afo, satria ny fetibe dia atao amin'ny faran'ny fotoam-pijinjana fahavaratra.
Araka ny SAFAR, hetsika fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra eo ambany fiahian'ny Minisiteran'ny Siansa Federaly momba ny Tany, ny afo mololo dia mitondra manodidina ny 35% amin'ny haavon'ny PM2.5 ao Delhi.
Ny zoma dia nampitandrina izany Delhi ny mponina mba tsy hanao fanazaran-tena sy hisorohana ny fandehanana an-tongotra. Nilaza izy fa tsy hanome fiarovana ampy ny saron-tava ary manoro hevitra fa tokony hikatona ny varavarankely rehetra ary tsy tokony hosorina ny trano, fa hosasana kosa.